सबैभन्दा पहिले कसले ‘सचिन..सचिन’ भनेका... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
सबैभन्दा पहिले कसले ‘सचिन..सचिन’ भनेका थिए?
मुम्बई, बैशाख २७ (एजेन्सी)
भारतीय क्रिकेटमा पूर्व स्टार ब्याट्सम्यान जतिबेला ब्याटिङ गर्न मैदानमा उत्रिन्थे, त्यतिबेला दर्शकदीर्घाबाट एउटै आवाज आउने गर्दथ्यो, ‘सचिन...सचिन।’ के तपाईंहरुलाई थाहा छ, यो लयलाई पहिलो पल्ट उच्चारण गर्ने व्यक्ति को हुन्?
सचिनले उनका समर्थकमाझ कौतुहल बनेको यो लयको उद्घोष कसरी भयो? यसको गोप्यता पहिलो पल्ट सार्वजनिक गरेका छन्। आफ्नो जीवनीमा आधारित फिल्म ‘सचिन अ बिलियन ड्रीम्स’ को एउटा गीत सार्वजनिक समारोहमा पुगेका सचिनले यो पुरै कथाको पटाक्षेप गरे।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, वैशाख २८, २०७४, १०:२४:१४